Kedụ ihe na - arụ ọrụ na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi bara ọgaranya? | Martech Zone
Fraịde, Septemba 28, 2012 Fraịde, Septemba 28, 2012 Adam Obere
Nkwalite igwe anaghị agbanwe agbanwe ma nwekwa obi abụọ. Otú ọ dị, n'ime alaeze nke mobile ahịa azum, efegharị efegharị nke nnukwu bandwidth smartphones na-eweta ụfọdụ ụgwọ ọrụ ma a bịa na mgbasa ozi mgbasa ozi bara ụba.
a infographic si Celtra egosiputa ntinye aka site na ihe ntinye aka 60 na mbadamba mbadamba na oru 4: ntụrụndụ, mkpọsa, ego na akpaaka. Key metrics gụnyere: Ntinye aka, gbasaa ma pịa-site na ọnụego, nyocha miri emi na arụmọrụ njirimara mgbasa ozi maka mgbasa ozi mgbasa ozi bara ụba.
Isi ihe nlele:
N'ime usoro mgbasa ozi, ihe karịrị 2/3 (67 percent) dị expandable animated ọkọlọtọ, na-eme ka ọ bụrụ usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu. E kewara 1/3 nke mgbasa ozi ndị fọdụrụ n'etiti interstitials (21 pasent) na ọkọlọtọ ọkọlọtọ (pasent 12)
N'ụzọ na-akpali mmasị, e nwere ọzọ iOS (55 pasent) mgbasa ozi karịa gam akporo (45 pasent) mana nnabata gam akporo na-aga n'ihu na Celtra na-atụ anya na ọnụọgụ ndị a ga-agbanwe na ọnwa ndị na-abịanụ.
Ntinye aka ọnụego maka mobile ọgaranya mgbasa ozi mgbasa ozi nkezi na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ (pasent 12.8) na ahụmịhe vidio na egwuregwu na-abụkarị ndị na-arụ ọrụ.
Ahụmahụ egwuregwu na-arụ ọrụ nke ọma maka ntụrụndụ na (pasent 16.6) nke ndị ọrụ na-azaghachi egwuregwu egwuregwu.
Ndị ọrụ bụ etinye aka na mgbasa ozi site na mgbasa ozi mkpanaka na ịkekọrịta ọdịnaya ejiri. (Pasent 8.7) kekọrịta na Facebook na (12.6 percent) Tweet. Na mgbakwunye, ụdị na-abawanye ijikọ ọrụ mgbasa ozi ọhụụ dịka Instagram, akụkụ anọ na Pinterest.
Direct nzaghachi atụmatụ dị n'ọtụtụ mgbasa ozi. Pịa ọrụ dị na mpụga, dị ka ụlọ ahịa ngwa, ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ na-etinyekarị na mgbasa ozi.